Ngwa 5 dị mkpa maka ama gị ma ọ bụ mbadamba | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa 5 dị mkpa maka ama ma ọ bụ mbadamba gị
Villamandos | | Ngwa, Mobiles
Smartphones na mbadamba aghọwo ngwaọrụ na-enweghị ike ịkewapụ nke anyị na-ejikarị arụ ọrụ nke ukwuu na mgbe ụfọdụ ọ dị ezigbo mkpa maka ụbọchị anyị taa. Nyere mkpa nke ngwaọrụ ndị a, enwere ọtụtụ ngwa na gburugburu ha, nke ọ bụla na-atọ ụtọ.
Ka i wee mara otu esi amata ọdịiche dị na ngwa dị mkpa na nke ọzọ abụghị, n'isiokwu a anyị chọrọ igosi gị Ngwa 5 dị mkpa maka ama ma ọ bụ mbadamba gị Na ọ bụghị naanị na ha ga-eme ka ị si na nsogbu nsogbu ahụ, mana ha ga-eme ka ụbọchị gị dịkwuo mfe.
Dị ka nkwanye, anyị nwere ike ịgwa gị na ọ bụrụ na ịnwebeghị ngwa ndị a anyị ga-egosi gị, anyị na-agba gị ume ịzụta ọtụtụ n'ime ha ka iji ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị dịkwuo mfe ma nwee nkasi obi.
1 Car chaja
2 Chaja na ọdụ ụgbọ USB 5
4 Mpempe akwụkwọ mpịachi maka mbadamba ma ọ bụ ama
5 USB Type C na HDMI nkwụnye
6 Ihe egwuregwu Bluetooth
Otu n'ime ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala ma ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala, dịka ọmụmaatụ, ogologo oge iji ruo ọrụ, bụ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.. You maghị mgbe batrị gị ga-agwụ na oge ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile dị mwute na anyị ga-etinye n'ime ụgbọ ala nwere ike ịbụ ebe kachasị mma iji kwụọ ụgwọ ngwaọrụ mkpanaka anyị ma ọ bụ mbadamba.
Ugbu a n'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke chaja nke ụdị a, nwere ụdị ụdị niile, kama na ha na-a toụ sịga ọkụ ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ anyị. N'okwu a, mgbe anyị nyochasịrị ọtụtụ, anyị ahọrọla otu n'ime ndị na-ere ahịa kacha mma na Amazon, nke na-enye anyị ọdụ ụgbọ mmiri USB 4 ma tinyekwa Ndenye Ntanetị 2.0 ngwa ngwa.
N'ezie, tupu ịmalite ịzụta chaja a ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, jide n'aka na ọkụ na-ese sịga na ụgbọ ala gị na-arụ ọrụ na ọ gaghị eme gị dịka m, m ga-akwụsị ịghaghachi chaja ahụ ebe ọ bụ na ọkụ na-ese sịga na ụgbọ ala m, nke m na-ejitụbeghị n’oge ọ bụla, anaghị arụ ọrụ.
Chaja na ọdụ ụgbọ USB 5
Ọ na - adịwanye njọ ịnwe ngwaọrụ mkpanaka abụọ, nke onwe ya na nke ọzọ, mbadamba iji nwee ọ freeụ na oge efu yana smartwatch. Achọrọ ebubo ngwa ngwa ndị a kwa ụbọchị n'ihi ya, ọ nwere ike ịbụ nsogbu mgbe ị na-akwụ ụgwọ ha, opekata mpe n'otu oge.
Iji nwee ike ime nke a, anyị nwere ike ị nweta otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị adọrọ mmasị ị ga-enwe ike ịchọta. Anyị na-ekwu okwu banyere a chaja na ọdụ ụgbọ USB 5, nke nwere ike ịkwado ya na ngwa ngwa ngwa ngwa ma bụrụ ezigbo enyemaka.
N'okwu m, ike gwụrụ m ịnwe tebụl m jupụtara na eriri na chaja ka m nwee ike ịkwụ ụgwọ ọtụtụ, ngwaọrụ doro anya, nke m nwere. Chaja a na na-enye gị ohere ịgba ụgwọ ngwa 5 n'otu oge, ọ ga - eme ka ị gabiga otu nsogbu n’emeghị nnukwu ego euro.
N'etiti ọtụtụ ndị ị nwere ike ịchọta ịzụta site na Amazon, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.. Ọbụna na-abanyeghị na koodu LUMSCOMP ị nwere ike irite uru site na ịkwụ ụgwọ 30% kwụ ọtọ na ọnụahịa mbụ. Tụkwasị na nke a, ọ bụghị ihe niile iji hụ ya na mbelata oge ụfọdụ nke ga - enyere anyị aka inweta ya n'ụzọ dị ọnụ ala.
Mpempe akwụkwọ mpịachi maka mbadamba ma ọ bụ ama
Ọ bụla onye ọrụ nwere ike dee a obere ederede na mebere kiiboodu nke ya mbadamba ma ọ bụ ama, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ dee ibu akụkụ anyị ga-eji otu n'ime ọtụtụ kiiboodu nke ga-ngwa ngwa-aghọ nkewa.
Otu n'ime nkasi obi kasịnụ anyị nwere ike inweta bụ a mpịachi keyboard anyị nwere ike ịchekwa ebe ọ bụla nke ahụ na-enye anyị njikọta bluetooh nke ahụ ga-enyere anyị aka iji ya na-enweghị inwe otu eriri n'etiti.
Ọ bụrụ na Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na anyị na-amam, nke nwere a ọnụahịa nke euro 23.50 na AmazonNwere ike ịzụta nke pere mpe ma ọ bụ nke dị ka nke anyị na-eji na kọmputa anyị. Igodo ọ bụla nke ụdị a na njikọta Bluetooth ga-enye anyị ohere iji ya, n'ụzọ kwụsiri ike, na anya nke 8 mita.
USB Type C na HDMI nkwụnye
Enwere ọtụtụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na ahịa USB ụdị C njikọ, nke ụfọdụ na-amasị na ọtụtụ ndị ọzọ na-enweghị mmasị n'ihi nsogbu ndị na-ebilite mgbe ị na-eji eriri ndị ọzọ ma ọ bụ chaja.
Uru nke ụdị njikọ a bụ na ọ na - enye gị ohere ịnyefe data, ike yana ọbụlagodi na - arụ ọrụ dị ka ọnụọgụ dijitalụ kwesịrị ekwesị na iyi egwu maka ekweisi.
N'ime ndị na-eme mkpesa banyere ụdị ọdụ ụgbọ USB a, anyị bụ ndị nke anyị nwere ụlọ jupụtara chaja na USB Type A, ma n'ezie na ha ekwesịghị ekwesị maka iji ngwaọrụ ndị a. Iji imeghari, ihe anyi gha eme karia oge, nihi na anyi agaghi enwe uzo ozo, anyi aghaghi see na ọtụtụ nkwụnye ndị dị na ahịa.
Otu n'ime ha bụ ihe nkwụnye ọkụ USB Type C ka HDMI, nke Lumsing mere nke ahụ ga-emekwa ka anyị mepụtaghachi ihu igwe nke ekwentị anyị ma ọ bụ mbadamba nkume anyị na tiivi anyị ma ọ bụ na kọmputa.
Ihe egwuregwu Bluetooth
N'ikpeazụ na ndepụta a, otu n'ime ndị ochie mara mma maka ngwa maka ama ma ọ bụ mbadamba enweghị ike ịfu, nke bụ ihe ọ bụla karịa igodo egwuregwu Bluetooth nke ahụ ga-enyere anyị aka ịnụ ụtọ ọtụtụ egwuregwu karịa nke anyị rụnyere na ngwaọrụ anyị.
Mgbe ị na-eji ihe eji egwu egwu, ahụmịhe ọ bụla nwere egwuregwu ọ bụla gbanwere nke ọma ma meziwanye nke ọma. Ma ọ bụ na anyị ekwesịghị iji ihe ọ bụla emetụ njikwa na-ekwe ka obere playability.
Egwuregwu egwuregwu a nke dọtara uche anyị, dakọtara na ngwaọrụ gam akporo na iOS, yana yana ngwaọrụ ọ bụla n'agbanyeghị etu ọ dị. Ọnụahịa ya bụkwa akụkụ ọzọ kachasị mma ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịzụta ya maka euro 27.71.
You kpebielarị ịzụta nke ọ bụla n'ime ngwa ndị anyị gosipụtara gị taa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Ngwa 5 dị mkpa maka ama ma ọ bụ mbadamba gị
Ọrụ Xperia X yiri HTC 10 na Galaxy S7 Edge na ngalaba igwefoto
Cowarobot R1, akpa akwa ga-eso gị ebe ọ bụla ị na-aga